Umatshini wombala weDoppler
Impompo yokufaka impompo yesirinji
I-intshi ezili-15 zeTouch Screen Laptop Ultrasound Sun-800S
I-laptop ye-ultrasound ye-GYN, i-OB, i-Urology diagnostic
Iliso lomonde SUN-603S
I-SUN-700S yokujonga umonde
I-SUN-906C Umbala weDoppler
I-SUN-906B Umbala weDoppler
I-SUN-906A Umbala wokuDoppler
Umatshini we-ECG 6 Isiteshi se-12 seLad Screen
Indawo yokuQala eShanghai, China Igama leBrand iSunbright Inombolo yemodeli SUN-7062 Amandla oMbane Isiqinisekiso soMbane seXesha lokuPhila emva kweNtengiso yeNkonzo yokuBuyiswa kunye nokuTshintshwa kwezinto zentsimbi, iplastiki yeShelf Life 1years Certification Quality ce Instrument Classification II standard standard. Imibala ye-LCD yeTouch Screen uyilo oluphezulu-slim Amanqaku okuthengisa axhasa ikhadi le-SD, i-USB yediski yoHlahlelo lweModyuli / iAuto / iArrhythmia ekhokele i12 ikhokelela kwiECGNET ...
Umatshini we-echo echo ulungelelanise uluhlu lwetroli yombala weDoppler ultrasound
Indawo yemvelaphi yaseShanghai, China Igama leBrand Sunbright Model Model SUN-908B Instrument classification Type II Portable Ultrasonic Diagnostic Devices, color Doppler imaging mode 2D, 3D, CF + B model kanyekanye, PDI, DPDI, TDI, TSI, etc EWE Probe connectors 4 PW duplex and triplex switched ngokukhululekileyo EWE IMT auto measuremet YES CW function YES YES Complex model Image YES PW auto trace measurements YES software package General, OB / GYN. encinci encinci ...
Impompo yokungeniswa kwe-Hospira Intshatsheli yokuthengisa ngokusetyenziswa kwabantu abadala Impompo yokumnika esibhedlele nasezikliniki
Indawo yokuQala eShanghai, eChina Igama leBrand Sunbright Model Model Ilanga-900 yamandla oMbane isiQinisekiso soMbane seXesha lokuPhila emva kweNtengiso yeNkonzo yokuBuyiswa kunye nokuTshintshwa kwezinto zentsimbi, iplastikhi yeShelf Life 1years Quality Certification ce Isixhobo seCandelo II somgangatho wokhuseleko. Iscreen Ukuthengisa okushushu i-CE evunyiweyo ICU narcology infusion Pump Ilanga-900 Ukufudumeza Umsebenzi ukhetho Iindlela zokusebenza / iVolumu / imo yexesha Ibhetri 1 ...
Impompo yokumnika ukusetyenziswa kwe-SUN-500 yexabiso eliphantsi lokukhutshwa kwempompo ngesirinji
Indawo yokuvela eShanghai, China Igama leBrand Sunbright Model Model I-SUN-500 Warranty 1 yonyaka emva kweNtengiso yeNkonzo yokuBuyisa kunye nokuTshintshwa kwezixhobo zoHlulelo lweeNdawo zoDidi II zoNcedo lokuQala, ukusetyenziswa kwempompo enye yokusetyenziswa kwepompo enexabiso eliphantsi Ukubonisa i-4.3 ye-intshi enkulu ye-LCD screen umsebenzi wokulawula kude. Isilawuli kude somsebenzi we-alarm ewe imo ye-V ininzi yendlela ye-V, imowudi ye-T, kunye nemowudi yobunzima bomzimba eyakhelwe-ngaphakathi ibhetri egcwalisekayo inokusebenza malunga neeyure ezi-3 Amanqanaba amathathu okuSebenza ...
1. enkulu 15 intshi LED umbala ukubonisa yokwenene Doppler umsebenzi USB amazibuko kunye VGA port kunye nezihlanganisi probe 2.
2. Ibhetri eyakhelwe-ngaphakathi, enokusetyenzwa ukuphikisana okungenani iiyure ezi-3 xa kucinyiwe umbane.
Isicelo esisisiseko: Isisu / i-Cardiac / i-Obstetrics / i-Gynecology / i-Urology / i-Andrology / iiNxalenye ezincinci / iVascular / iPediatrics / i-Musculoskeletal njalo njalo
IIMODES ZOKUGQIBELA: B, 2B, 4B, M, B / M, B / C, B / D, B / C / D, B / CFM / D, imodeli yeCF + B ngaxeshanye, Umbala wePDI, umbala oBini, ngaxeshanye2D / 3D / 4D Umbala wekhompawundi, i-PW, i-CW Duplex / i-Triplex, i-CFM, i-CDE, iPD, i-PD yeDirectional, iCD. I-Anatomy M, imo yombala M
5. I-Doppler esekwe kwi-PC ene-Windows system, enokuqhagamshela nabaphi na abashicileli nakweyiphi na imveliso. Indawo eprintiweyo inokuhlengahlengiswa, enokuba yimifanekiso, iingxelo okanye umfanekiso + ingxelo, njl.
6. Iprothokholi eyakhelwe-ngaphakathi ye-DICOM 3.0
7. Umsebenzi weelwimi ezininzi: isiNgesi, isiTshayina, iSpanish, nesiPhuthukezi, isiRashiya, isiArabhu, isiFrentshi, isiVietnam, isi-Indonesia, isiJamani, isiPersi, isiThai njalo njalo.
1. I-Ultrasound esekwe kwi-PC, enokuqhagamshela nabaphi na abashicileli nakweyiphi na imveliso.
2. Isoftware eyakhelwe-ngaphakathi ye-3D, yasimahla ukuba yenziwe yasebenza ngexesha lokuPhuculwa kweNew.
3. Ibhetri eyakhelwe-ngaphakathi, enokuthi iqhubeke isebenza ubuncinci iiyure ezi-3 xa kucinyiwe umbane.
4. Iindidi ezi-6 zeengxelo ezizenzekelayo kunye nemilinganiselo ye-OB / GYN, Cardiac, Urology, Amalungu amancinci, iMisipha, iVascular, njl.
5. Isigadla esikhulu se-LED esine-intshi ezili-15.
6. Ngaphantsi kokusebenzisa, iingcebiso ezinxulumene nazo ziya kubonakala kumzantsi wesiboniso ukukhokela ukusebenza kwakho okulandelayo
Umsebenzi weelwimi ezininzi: IsiNgesi, isiTshayina, iSpanish, kunye nesiPhuthukezi, isiRashiya, isiArabhu, isiFrentshi.
8. Umgangatho womfanekiso ogqwesileyo kunye ne-175 yeedigri yokubukela kwinqanaba
IIMODES ZOKUGQIBELA: B, 2B, 4B, M, B / M, B / C, B / D, B / C / D, B / CFM / D, imodeli yeCF + B ngaxeshanye, Umbala wePDI, umbala oBini, ngaxeshanye2D / Umbala we-3D Umbala, i-PW Duplex / i-Triplex, i-CFM, i-CDE, iPD, i-PD ekhokelayo, iCD. I-Anatomy M, imo yombala M
1. enkulu 15 intshi LED umbala ukubonisa yokwenene Doppler umsebenzi izibuko USB kunye VGA port.
3. Isicelo esiphambili: Isisu / i-Cardiac / i-Obstetrics / i-Gynecology / i-Urology / i-Andrology / iiNxalenye ezincinci / iVascular / iPediatrics / i-Musculoskeletal njalo njalo.
6. Iprotocol eyakhelwe-ngaphakathi ye-DICOM 3.0
1. Ubunzima bokukhanya kwe-0.5 kg, elula kakhulu ukuyenza.
2. ICrystal icacile ngomboniso wesisombululo esiphakamileyo.
3. Ibhetri engenakunqunyulwa enokusebenza ngaphezulu kweeyure ezi-3.
4. 192 izakhelo ze-cine-memory kunye nemifanekiso eyi-1024 yokugcina isigxina.
5. Umsebenzi wokubhala wokubhala owenziweyo ngonxibelelwano lwe-USB kunye nonxibelelwano lwe-SD
6. Enye intsebenzo iyafana nekhompyuter yelaptop, enje ngemowudi yokonga amandla, ukuchukumisa imouse njalo njalo.
7. Isoftware yobuchwephesha: Isoftware yeZilwanyana ngokubanzi, isoftware yeZilwanyana eziBelethayo, isoftware yeZilwanyana zezilwanyana.
8. Izibuko lokuphuma kwividiyo, qhagamshela ngekhompyuter, ukubeka iliso kwangaphandle kunye neprinta ye-HP ngqo
9. Ixhasa umphezulu wombala, indawo ye-pseudo-umbala.
10. Umntu ngamnye uyitshaja ngokutsha ibhetri kukhetho
Esi sixhobo sinokubeka iliso kwiiparamitha ezinje nge-ECG, i-RESP, i-SPO2, i-NIBP, kunye ne-Dual-channel TEMP. Idibanisa imodyuli yokulinganisa ipharamitha, ukubonisa kunye nokurekhoda kwisixhobo esinye ukwenza isixhobo esidibeneyo kunye nesiphathekayo. Kwangelo xesha, ibhetri yayo eyakhiweyo inokubuyisela ukubonelela ngokuhamba kwesigulana.
1.Isicelo: Isisu / i-Cardiac / i-Obstetrics / i-Gynecology / i-Urology / i-Andrology / iiNxalenye ezincinci / iVascular / iPediatrics / i-Musculoskeletal njalo njalo.
I-PC esekwe kwi-Ultrasound, enokuqhagamshela nabaphi na abashicileli nakweyiphi na imveliso.
6. Ngaphantsi kokusebenzisa, iingcebiso ezinxulumene nazo ziya kubonakala kumzantsi wesiboniso ukukhokela ukusebenza kwakho okulandelayo.
Ifowuni: +86 18616107538
Idilesi: Ukwakha i-C6, i-Chinese Security Valley, iSithili saseTongshan esitsha, iXuzhou, China